उदास मुद्रामा रक्सी पिउँछु- विविधा - कान्तिपुर समाचार
हाम्रा ठूला–ठूला कम्युनिस्ट नेता कमरेडहरूले पवित्र रक्सी पिउन थालेका छन् भने मेरो रक्सीपियाइचाहिँ स्वाट्टै घटेको छ ।
पुस २१, २०७५ विमल निभा
काठमाडौँ — मित्रहरू हो, म त्यति रक्सी पिउँदिनँ । तथापि यस मामलामा बदनाम छु । मलाई अपार कष्ट केमा छ भने म जति रक्सी पिउँछु, यसको तुलनामा बेसी नै बदनाम छु । मेरो रक्सीपियाइ र बदनामीको कुनै वास्तविक तालमेल बनेको छैन । त्यसउसले यसको यथोचित मिलान होस् भन्ने कामना गर्नु कदापि नाजायज होइन ।
म जुन बखत राजनीतितर्फ एकाएक आकर्षित भएको थिएँ, रक्सी पिउनुलाई त्यतिको निको मानिँदैनथ्यो । ठीकै पनि हो । र, यसको स्वाभाविक परिणामस्वरूप म निकै समयसम्म यसबाट टाढा नै रहेँ । अब रक्सीसँग मेरो कहिले र कसरी अपर्झट भेटमुलाकात भयो, यसको एउटा बेग्लै लामो किस्साकहानी रहेको छ । त्यतातिर नजाउँ ।
यतिचाहिँ निर्धक्क भन्छु, आरम्भमा म लुकी–लुकी रक्सी पिउने गर्थें । केही समयपछि यो स्वत: खुला भयो । मजस्तो अकिञ्चन टाइपको रक्सी पिउने मनुवाले के लुकाउने ? त्यसबखत बडेबडे नेताहरू खुलमखुला रक्सी पिउन थालेका थिए । मेरो जिल्लाका तत्कालीन देब्रे ढल्कुवा र दाहिने ढल्कुवा नेताहरूका नाम राजनीतिक कर्मभन्दा रक्सी पिउनुमा नै बढ्ता थियो । म त सानोतिनो समर्थक थिएँ । आज पनि छु । जे होस्, रक्सी पिएर मलाई घाटाचाहिँ भएन ।
तपाईंहरूलाई थाहै छ, म एक कवि पनि हुँ । र, कविताको फाँटमा रक्सी नामक जिनिसको आफ्नै खाले महत्त्व रहेको छ । केही कविहरू त आफ्नो कविताकर्मभन्दा रक्सीले नै ख्यातनाम भएका छन् । अहिले पनि यस्ता नाम चलेका वरिष्ठ र अवरिष्ठ कविहरू नभएका होइनन् । नेपाली कवितासँग धेरथोर परिचित हुनेहरूबाट यो छिपेको छैन । अब मचाहिँ कुन कोटीको कविमा पर्छु, आफैं के भन्न सक्छु ? तर सवाल कवि र कविताको नभएर राजनीतिको हो । अझ रक्सीको हो । यतैतिर जान्छु ।
मआफ्नो जिल्ला छाडेर राजधानी काठमाडौंमा प्रवेश गर्दा मेरो केही यस्ता युवा नेताहरूसँग सरसंगत भयो, जो राजनीति र रक्सीमा समान रूपले गतिशील थिए । केही प्रगतिशील थिए । र कालान्तरमा यिनीहरू मेरो अभिन्न मित्रमा बदलिए । अहिले पनि यो कायमै छ । मेरो मतलव मित्रता र रक्सी, दुवैसँग हो । म यी मित्रहरूका नाम खुलाउन चाहँदिनँ ।
यसमा प्रशस्त खतराको सम्भावना छ । विशेषत: रक्सी पिएको बखत । यस बखत मेरा मित्रहरू मित्रताको सीमारेखामा बसिरहने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यो मैले भोगिसकेको यथार्थ हो । यस्तो व्यर्थको जोखिम नउठाउनु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।
म रक्सी प्रसंगमा आफ्ना मित्रहरूका नाम नलिने विचारमा थिएँ । तर लेखनको बाध्यतावश लिनुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । र, यसका साथसाथै म के पनि भन्छु भने यी जम्मै नामहरू पूरै काल्पनिक हुन् । अत: वास्तविकतासँग यसको कुनै पनि प्रकारको लेनदेन छैन । कदाचित कसैसित मिल्न गएमा अग्रिम क्षमायाचना गर्छु ।
त्यसबखतका मेरा मित्रहरू नारायण ढकाल, गोपाल गुरागाईं, हरिहर अधिकारी ‘श्यामल’, रवीन सायमि, राजेन्द्र स्थापित, शम्भु श्रेष्ठ, भीमसेन राजवाहक आदि पार्टीसँग सम्बन्धित अखबारमा काम गर्थे । र, म पनि धेरथोर रूपमा भए पनि मित्रमण्डलीमा सामेल थिएँ । हाम्रो एकमात्र काम–कर्तव्य भनेको त्यसबेलाको कठिन परिस्थितिमा अखबार चलाउनु थियो ।
यही सिलसिलामा रक्सी पनि चल्ने गथ्र्याे । कतिपय अवस्थामा रक्सी नै बेसी चल्थ्यो । यसको अभिप्राय अखबार चल्दैनथ्यो भन्ने होइन । अखबार पनि उसरी नै चल्थ्यो । र, सही मानेमा भन्ने हो भने पार्टी लाइनअनुसार चल्थ्यो । किनभने पार्टीका एक जिम्मेवार नेता यसको प्रमुख सञ्चालक (बोस) का रूपमा खटिएर आउने गर्थे । कहिले भूमिगत पोलिटब्युरो मेम्बर कमरेड झलनाथ खनाल भने कहिले कमरेड अझलनाथ खनाल । (यसमा विभिन्न नेता कमरेडहरूका नाम) । यही चलन थियो ।
अत: ‘बोस’ को आँखा छलेर रक्सी पिउनुपथ्र्याे । र, यसरी नै उताबाट पनि ‘आँखाछलाई’ को काम भूमिगत तवरले भइरहेको थियो भने हामीलाई थाहा हुने कुरै थिएन । अब थाहा भएको भए पनि यतिका वर्षपश्चात् यसको के अर्थ छ ? जे भए पनि हमीले सँगसँगै बसेर आनन्दपूर्वक रक्सी पिउने सौभाग्य कहिल्यै प्राप्त गरेनौं । यही पार्टीबाट आएका नेता कमरेडका निर्देशनबमोजिम मेरा मित्रहरू सम्पादकीय लेख्थे, जिल्ला–जिल्लाबाट आएका फुटकर समाचार छाप्थे र समसामयिक तिखो कार्टुन कोर्थे । म भने स्तम्भ लेखनमा संलग्न थिएँ । मेरो स्तम्भको शीर्षक थियो– देब्रेकुना ।
हाम्रो जमघटमा यदाकदा अन्य मित्रहरू पनि सम्मिलित हुने गर्थे । उदाहरणका लागि राजव, हरि रोका, रघुजी पन्त, विष्णु प्रभात, प्रकाश काफ्ले, गोपाल थपलिया, अशोक श्रेष्ठ, अग्निशिखा, शार्दूल भट्टराई, पुरुषोत्तम सुवेदी, गोविन्द वर्तमान इत्यादि । यो अखबारी जमघट कहिलेकाहीँ रक्सीको जमघटमा पनि फेरिने गथ्र्याे ।
खास गरेर अखबार निस्कने दिन बुधबारको अघिल्लो साँझ अर्थात् मंगलबारको रात । यस दिन हामी केही अन्तरंग मित्र काम–साम सकाएर नजिकैको एक रेस्टुराँमा रक्सी चलाउने गथ्र्याैं । यही समयको कुरा हुनुपर्छ । एक सम्साँझ मित्र हरि रोका (यो पनि काल्पनिक नाम हो नि) हतारका साथ अखबार कार्यालयमा प्रवेश गरे । उनी केही तनावमा देखिन्थे । त्यसैले मित्रहरूले एकैचोटि सोधे, ‘के भयो कमरेड ?’
‘आज कमरेड माधव ममाथि बेसरी खनिए मित्रहरू ।’
‘के कुरामा कमरेड ?’
‘एक कम्युनिस्ट भएर रक्सी पिएकोमा कमरेड माधवको मप्रतिको उग्र विरोध थियो मित्रहरू ।’
‘रक्सी पिएकोमा ?’
‘हो, कहिलेकाहीँ म यसो अलिकति रक्सी पिउँछु, यही कुरोमा कमरेड माधवको जिकिर के थियो भने रक्सी पिउनु कम्युनिस्ट आचरणभित्र पर्दैन ।’
‘अनि तपाईंले कमरेड माधवलाई के भन्नुभयो त कमरेड ?’
तत्पश्चात् ‘हरिमाधव’ संवादमा कमरेड हरि रोकाले त्वरित जवाफमा कमरेड माधवलाई के–के अर्थात् जे–जे भने, त्यो यहाँ मैले सरासरी लेख्न नचाहेकै हो । ‘कम्युनिस्ट भएर घूससुस खाई बेइमानी गर्नुभन्दा रक्सी खानु–पिउनु नै बेस’– यस्तै कडा प्रकारका कुराहरू थिए सायद । (यस सम्बन्धमा मित्र हरि रोकाको एक संस्मरणात्मक लेखोट प्रकाशित भइसकेकाले त्यही पढ्ने अनुरोध छ) ।
मित्रहरू हो, धेरै पहिले घटित एक रक्सीसम्बन्धी कुराकोछ्वास्स उल्लेख अप्रासंगिक होइन । यसको ठोस कारण छ । हामी त्यसबखत गलत रक्सी पिइरहेका थियौं त † वस्तुत: कुरो यसभन्दा विस्तृत किसिमको छ । त्यही भन्छु । यतातिर के थाहा भयो भने हाम्रो रक्सी गलत मात्र नभएर विलकुलै अपवित्र पनि थियो ।
यो पवित्र र अपवित्रको कुरो मेरो कोरा कल्पना होइन । यसको शतप्रतिशत जीवित साक्षीका रूपमा कुनै बखत कम्युनिस्ट भएर रक्सी पिएकोमा कमरेड हरि रोकालाई बेस्सरी हप्की–दप्की गर्ने कमरेड माधव रहेका छन् । वास्तवमा कुरो के हो भने केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सफल अगुवाइमा सुसम्पन्न ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ मा धुमधामसँग पवित्र रक्सी (होली वाइन) को सानदार सिलसिला चलेको थियो ।
याद रहोस्, यो विशुद्ध क्रिश्चियनधर्मी ‘होली वाइन’ कार्यक्रमको प्रमुख संयोजक पहिलेका नेकपा एमाले र अहिलेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपाल थिए । पवित्र रक्सीका स्वदेशी प्रस्तोता । र, हेर्नाेस् मेरो दु:ख, यता हाम्रा ठूला–ठूला कम्युनिस्ट नेता कमरेडहरूले पवित्र रक्सी पिउन थालेका छन् भने मेरो रक्सीपियाइचाहिँ स्वाट्टै घटेको छ ।
यसमा रक्सीको कुनै दोष छैन । हो, मेरो कमजोर शरीरको असमर्थता यसको दोषी हो । समग्रतामा दोष मेरै हो । म सहजतापूर्वक स्वीकार गर्छु । तर म रक्सीबाट धेरै पर रहन सक्दिनँ मित्रहरू ।
तसर्थ अहिले पनि कहिलेकाहीँ आफ्ना मित्रहरूसँग बसेर रक्सी पिउने गर्छु । केही गरी मित्रहरूसँग भेटघाट हुन नसके एक्लै धुमधुम्ती कोठामा बसेर उदास मुद्रामा रक्सी पिउँछु– उही अपवित्र रक्सी ।
प्रकाशित : पुस २१, २०७५ ०८:०४
घाँटी दुखेर, असजिलो भएर, चिलाएर, निल्न गाह्रो भएर होस् या बोली बस्दा एन्टिबायोटिक सेवन गरिहाल्ने बानी छ तर यसले ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ ।
पुस २१, २०७५ डा. ढुण्डिराज पौडेल
काठमाडौँ — प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धका कारण कैयौं एन्टिबायोटिक आविष्कार गरिएका थिए । समयमै निरूपण हुन नसके एन्टिबायोटिकका कारण विश्वयुद्धमा जस्तै अकारण र अकालमा धेरै मानिसको मृत्यु हुने निस्चित छ ।
अन्य विशेषज्ञतामा जस्तै नाक, कान एवं घाँटीको समस्या देखापर्ने बित्तिकै एन्टिबायोटिक अनावश्यक प्रयोग हुने गरेको छ । कडा–कडा एन्टिबायोटिक दुर्गमका समेत निजी औषधि पसल र व्यवसायिकामा समेत पुग्ने गर्छन् ।
घाँटी दुखेर, असजिलो भएर, चिलाएर, निल्न गाह्रो भएर होस् या बोली बस्दा एन्टिबायोटिक सेवन गरिहाल्ने बानी छ । नाक, कान, घाँटी विभागमा घाँटीको समस्या लिएर जचाउन आउने आधाभन्दा बढी बिरामीले प्रतिदिन एक चक्कीको दरले सेवन गर्न मिल्ने ५०० र २५० मिलिग्राम एन्टिबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन सेवन गरिसकेका हुन्छन् ।
यो धेरैजसो घाँटी दुखाइमा आवश्यक नपर्ने र विशेष प्रकारको ब्याक्टेरियाको संक्रमणमा प्रभावकारी हुने एन्टिबायोटिक हो । दिनको एक चक्कीका दरले केही दिनमात्रै सेवन गरे पुग्ने यो औषधि दुरुपयोग हुंँदा ड्रग रेसिस्टेन्ट अर्थात औषधि विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता विकास हुने गर्छ । यसको अनावश्यक प्रयोगबाट मुटु, कलेजोसम्मलाई असर पुग्छ । सामान्यतयाएक सातामा आफै निको हुने भाइरस संक्रमण रुघाखोकी लाग्ने बित्तिकै एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्दा उल्टै हानि पुग्छ ।
एमोक्सिक्लाभ, एमोक्सिसिलिन, क्विनोलिनदेखि विशेष एवं गम्भीर खाले संक्रमणमा प्रयोग गरिने नयाँ एन्टिबायोटिकको समेत दुरुपयोगले चिकित्सा क्षेत्रमा संकट पैदा हुँदैछ । तोकिएको भन्दा कम मात्रा एवं अवधिको अपूरो एवं अधुरो एन्टिबायोटिक प्रयोगले पनि असर पार्छ । घाँटी दुख्ने, खसखस हुने, निल्न गाह्रो हुने, कानतिर दुखाइ सर्ने एवं बोलाइमा अप्ठेरो हुने जस्ता घाँटीसँंग सम्बन्धित समस्यामध्ये केहीमा तुरुन्तै प्रभावकारी एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्छ । अधिकांश समस्यामा भने एन्टिबायोटिक आवश्यक पर्दैन । घाँटीको समस्या पर्ने बित्तिकै एन्टिबायोटिक सेवन गर्नुभन्दा रोग ठम्याउनु आवश्यक हुन्छ ।
मुखको पछाडिको फ्यारिन्जाइटिस, टन्सिलाइटिस, इपिग्लोटाइटिस, स्वर यन्त्रको ल्यारिन्जाइटिस थाइरोइडको थाइरोइडाइटिस, घाँटीमा गिर्खाहरूको लिम्फाइडिनाइटिसदेखि मांसपेशी एवं विभिन्न ठाउँमा संक्रमण, सुजन पैदा हुनसक्छ । घाँटीमा कुनै वस्तु अड्किँदा पनि दुखाइ र जलन पैदा हुनसक्छ । आमाशयमा खाना पचाउन सहयोग गर्ने अम्लीय पदार्थ फर्केर घाँटीमा जलन भई अप्ठेरो हुनसक्छ ।
सामान्यतया जलन या संक्रमण अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन हुन्छन् । अल्पकालीन घाँटीको संक्रमण पनि एन्टिबायोटिक चाहिने र नचाहिने खालका हुन्छन् । विशेषगरी बच्चामा हुने घाँटीको ब्याक्टेरियल संक्रमण जस्तो– टन्सिलाइटिस, इपिग्लोटाइटिस, डिप्थेरिया, कान र पछाडि हड्डीमा समेत दुख्ने र सुन्निने गम्भीर समस्या, घाँटीमा सेतो पिपजस्तो पदार्थ जम्मा भई दुख्ने समस्यामा तुरुन्तै प्रभावकारी एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई भर्ना गरी नसाको माध्यमबाट पनि प्रभावकारी एन्टिबायोटिक चलाउनुपर्छ, नत्र ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । गर्धन मुख्यतया छाला, बोसो, मासु र हड्डीबाट बनेको हुन्छ । गर्धन दुख्दैमा जथाभावी एन्टिबायोटिक सेवन गर्न हँुंदैन । गर्धनको धेरैजसो दुखाइ मांसपेशी या हड्डीका कारण पैदा हुन्छ ।
घाँटी या गर्धनमा उब्जिएको रोगका कारण सिर्जित दुखाइ कानमा सर्न सक्छ । कानको दुखाइ लिएर आउने बिरामीको घाँटी या गर्धनमा समस्या हुनसक्छ । नाक बग्नु, हाछ्युंँ आउनु, बोली धोद्रो हुनु, रुघाखोकीसँंगै घाँटी दुख्नुको कारण भाइरस हो । यसमा एन्टिबायोटिकको कुनै भूमिका रहन्न । रुघाखोकी या भाइरसको संक्रमण हँदा घाँटी दुख्ने, घाँटी रातो हुने र निल्न गाह्रो हुने गर्छ, जुन समस्या सामान्यतया एक सातामा आफै निको हुन्छ । भाइरसकै कारण भाइरलको संक्रमण हँुंदा भिटामिन सी र यथासम्भव पोषिलो खानासहित प्रशस्त झोलिलो पदार्थ सेवन गर्नुपर्छ ।
रुघाखोकीसँंगै घाँटी दुख्दा अनि मुख र जिब्रोको पछाडि दुईतिर रहेका टन्सिल पनि सामान्यतया रातोमात्रै भई सुन्निँदा एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्ने ब्याक्टेरियाको संक्रमण कारक बनेको हुँदैन । यस्तो संक्रमणको समयमै उपचार नभए ज्यानलाई जोखिममा पार्नसक्ने जटिलता पैदा हुन सक्छन् ।
घाँटी भित्रको जलन अर्थात फ्यारिन्जाइटिस हुँदा पनि दुबैतिरका टन्सिल रातो भई सुन्निएका हुन सक्छन् । यसरी संक्रमण भई एकपटक सुन्निएका टन्सिलको आकार पूर्व अवस्थामा नजाने हुँदा बिरामी र बिरामीका अभिभावक चिन्तित हुने गर्छन् । त्यस्ता टन्सिललाई आवश्यक नपरिकन निकाल्न जोड दिने गरिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनावश्यक टन्सिलको शल्यक्रिया रोक्न फाल्नुपर्ने अवस्था तोकिदिएको छ । टन्सिलको आकारमात्रै ठूलो देखेर एन्टिबायोटिक सेवन र शल्यक्रिया गर्नु पर्दैन । घाँटी दुख्यो भन्दैमा धेरै तातो पदार्थ सेवन गर्नुहुन्न, झनै समस्या निम्तिन्छ । बरु तातो र चिसो वस्तु छिटो–छिटो प्रयोग गर्दा किटाणु फस्टाउँछ ।
घाँटी दुख्नुका साथै खकारसहित खोकी लाग्दा एक सातामा सन्चो हुनाको सट्टा बाक्लो सिंगान सहितको खोकी लागे एन्टिबायोटिकको सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । घाँटी दुख्दा मुख बाएर भित्रमात्रै होइन, घाँटीलाई बाहिरबाट पनि छाम्नुपर्छ । रुद्र घण्टी या त्यसको मुन्तिर थिच्दा च्वास्स दुख्न गए त्यो थाइरोइडको सुजनका कारण हुनसक्छ ।
यो धेरैजसो भाइरल आफै निको हुने या अन्तरनिहित कारणले सिर्जित हुन्छ । यसमा स्टेरोइड औषधि दिने गरिन्छ । घाँटीमा रहेका अन्य ग्रन्थिहरू (लिम्फनोडहरू) पनि संक्रमण एवं क्यान्सरका कारण दुखाइसहित या दुखाइ बिना पनि सुन्निन सक्छन्, जसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
क्यान्सर या शंका ?
आफ्नो पारिवारिक सदस्य, आफन्त या चिनेजानेका कोही व्यक्तिमा घाँटीको क्यान्सर रहेछ भने घाँटीमा अप्ठ्यारो महसुस गर्ने कैयौं व्यक्तिले क्यान्सरको चिन्ता लिने गर्छन् । उनीहरू लामो समयसम्म मनोवैज्ञानिक समस्याले ग्रस्त हुन्छन् र अनावश्यक परीक्षणमा ठूलो धनराशि खर्च गर्छन् ।
दुई साताभन्दा बढी निल्न गाह्रो भए, बोली धोद्रो भए, घाँटी र कानतिर दुखाइ सर्न गए, घाँटीमा गिर्खा या ग्ल्यान्ड बढ्न गए क्यान्सरको शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी चुरोट, रक्सी, सुर्तीजन्य, सुपारीजन्य आदि हानिकारक वस्तुका सेवनकर्ता मुख, जिब्रो, घाँटी सम्बन्धी क्यान्सरको सिकार बन्न सक्छन् ।
आणुवंशीय एवं वंशानुगत कारणले पनि सन्ततिहरू थाइरोइड लगायतका क्यान्सरबाट पीडित भइरहेकै छन् । यस्ता जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूमा घाँटी दुख्ने, सांँच्चिकै निल्न गाह्रो हुने, स्वर सुक्दै जाने, घाँटीका गिर्खा सुन्निँदै जाने, निको नहुने घाउखटिरा हुने जस्ता लक्षण देखिए पनि क्यान्सरको शंका गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लेखक वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटीविभाग प्रमुख हुन् ।
प्रकाशित : पुस २१, २०७५ ०८:०२